Fitiavan-tanindrazana Mila alain-tahaka ny Amerikana
Na inona na inona tsy fitiavan’ny Amerikana sasany ny filohany Donald Trump dia hita ny firaisankina.
Manoloana ny zava-misy ankehitriny mahakasika ny disadisa amin’ny firenena Iraniana dia ankavitsiana ary zara raha misy ny amerikana manome tsiny ny filohany. Hita taratra ny firaisana sy ny fitiavan-tanindrazana ka na inona na inona fanapahan-kevitra lehibe dia iaraha-mizaka ny vokany. Mafy ary matotra ny fanaovana politika sy toekarena amerikana. Efa manorisory ny firenena arabo maro, ohatra, ny fiarovana sy ny fiandanian’ny amerikana amin’ny Israeliana na dia efa misy fotoana aza tena diso i Israel saingy tsy mivadibadika ny fanapahan-kevitra. Raha mba tahaka itony ny firaisan-tsaina sy ny fitiavan-tanindrazana eto Madagasikara dia handroso vetivety ny firenena. Ny zavatra tsapa dia mifamingampingana ary tsy misy manaiky diso ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara. Ankoatra izay dia mangatsiaka ny fifandraisana ary ny fieboeboana sy ny fisehosehoana ary ny tsindrio fa lavo no misy eto ka na hisy hanafika aza ny firenena dia ahiana ho samy hanavotra ny tenany fotsiny ny Malagasy.